အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အာဃာတ?? - Yangon Media Group
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အာဃာတ??
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင် ညွန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အာဃာတ တရားမထားကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းက ဦးစီးကာ စာဆိုတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် သက်ကြီးစာပေ ပညာရှင်များ ပူဇော်ကန်တော့ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ပူဇော် ခံပုဂ္ဂိုလ်များထဲတွင် စစ်အစိုးရ လက်ထက် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်သည် ကန်တော့ခံပုဂ္ဂိုလ် တွင်ပါဝင်လာခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် လည်းတက်ရောက်ကန်တော့ခဲ့ သည့်အတွက် စာပေအသိုင်းအ ဝိုင်း၊ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပြည်သူလူထုအကြားဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ယင်းအချက်များနှင့် ပတ် သက်၍ ဝန်ကြီးချုပ်က ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် ပုဇွန် တောင်မြို့နယ်ရှိ ပြည်တော်သစ် အိမ်ရာစီမံကိန်းမင်္ဂလာပိုင်တိုင် စိုက်ထူခြင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနား တွင် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ”ကျွန်တော်တို့ အာဃာတ တရားတွေ၊ လက်တုံ့ပြန်မှုတွေ ဘယ်တော့မှ လုပ်သွားဖို့မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်က အခုအချိန်မှာဝန်ကြီးချုပ် ပါ။ ဦးခင်ညွန့်က သာမန်အရပ်သား တစ်ယောက်ပါ။ အကျဉ်းထောင် ကထွက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန် တော်တို့ အတုံ့အလှည့်တွေထား ပြီးတော့ တုံ့ပြန်နေဖို့ မလိုအပ်ပါ ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်စေတနာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် အာဃာတ တရားတွေမရှိဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ဘက်က ရင်ထဲမှာမရှိဘူးဆို တာ ပြသနိုင်ဖို့လိုပါတယ်”ဟု ပြော ကြားခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် ၎င်းကိုယ်တိုင် ထောင်တွင်းအကျဉ်းစံဘဝဖြင့် ၁၅ နှစ်နေခဲ့ခြင်းမှာလည်း လက်တုံ့ ပြန်ရေးအတွက်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အ ခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက်သာဖြစ်ကြောင်း၊ မေတ္တာ တရားဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လို အပ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။ ယမန်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့်ပွဲ သည် စာရေးဆရာအသင်းကစီစဉ် ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ¤င်းအနေဖြင့် နှစ် စဉ်တက်ရောက်နေသည့် နည်းတူ တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။
”ဒီအခမ်းအနားပွဲဟာ နှစ် စဉ်နှစ်တိုင်း စာဆိုတော်နေ့ကို ဂုဏ် ပြုတဲ့အနေနဲ့ ကျင်းပဆောင်ရွက် တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်ရွက်တာ ကအသင်းကနေ ဦးဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအ ခမ်းအနားပွဲကို ကျွန်တော်တို့က ချီးမြှောက်တယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စာရေးဆရာတွေကို အသိအမှတ် ပြုရမယ်။ သူတို့ကတိုင်းပြည်တိုး တက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက် လမ်းပြပေးနေတဲ့သူတွေ တကယ့် အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် အရေးပါတဲ့အခန်း ကဏ္ဍမှာရှိပါတယ်။ ဒီအတွက် ဒီအခမ်းအနားကို ကျွန်တော် တက် ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအ ခမ်းအနားပွဲရဲ့ စီစဉ်ထားမှုတွေ အားလုံးက အသင်းက စီစဉ်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနား ပွဲမှာ တစ်ချိန်က တပ်မတော်ထောက် လှမ်းရေးရဲ့ အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ် ကြီးခင်ညွန့်တက်လာတွေ့ရပါ တယ်။ ပစ္စည်းကမ်းတဲ့ဘက်မှာ လည်း ကျွန်တော်ပေးရမယ့်ဘက် မှာ လာပြီးတော့ရှိပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်က ဒီမှာ တက်ရောက်လာတဲ့ စာရေးဆရာ တွေအားလုံးက အသက်အရွယ်အ ရသော်လည်းကောင်း ဂါရဝတရား နဲ့သော်လည်းကောင်း သွားနှုတ် ဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လက် ဆောင်ပေးရမယ့်သူ အားလုံးကို ကျွန်တော်ကမ်းပေးပါတယ်။ လက် ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုး မင်းသိန်းကဆက်လက်ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအ သင်းအနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ကို ထည့်သွင်းခြင်းမှာ သဘောရိုးဖြင့်သာဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားထားသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဖြည့်စွက်ငွေကျပ် ??